Go Global Kufambisa kunopedzisa matatu ekuwedzera ekuwanikwa evanopa pekugara veB2B
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Go Global Kufambisa kunopedzisa matatu ekuwedzera ekuwanikwa evanopa pekugara veB2B
Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Israel Breaking News • Italy Kuputsa Nhau • nhau • Romania Kupwanya Nhau • South Korea Kuputsa Nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
· Go Global Travel inogamuchira Olympia Europe (UK) nemakambani maviri eItari mumhuri yayo
· Go Global Travel yakabudirira kupedza kusangana kwegore rapfuura kutenga muPoland, Romania neSouth Korea
Go Global Travel Ltd. ("Go Global"), inotungamira yepasirese B2B yekufambisa tekinoroji uye mupi wekugara, yazivisa nhasi kuwanikwa kwevatatu vekugara kweB2B pekugara vanosanganisira Olympia Europe, UK based hotera yekutengesa, uye makambani maviri eItari. Aya mashandisirwo anotevera kubudirira kwakabatanidzwa kwekutenga katatu kwakapedzwa mugore rapfuura.
Olympia Europe mutambi akasimbiswa muindasitiri yehotera yeB2B ine hukama hwakanangana neanopfuura makumi mashanu emahotera muUSA, Europe neMiddle East. Iwo ane ruzivo manejimendi zvikwata zvezvose zvitatu zvakawanikwa zvinopinda muGo Global Kufamba uye voramba vachiwedzera mabasa avo emuno.
Go Global ikambani inotungamira yekufambisa tekinoroji inopa itsva yekuchengetera pekugara chikuva cheB2B vatengi. Go Global ikambani yepasirese ine gumi nematanhatu emahofisi emitauro yakawanda kutenderera pasirese ayo anopa 13/24 mitauro yemuno vatengi vatengi. Iko kuwanikwa kwazvino kuchawedzera kuvapo kweGo Global nemahofisi matatu matsva muItari neUK. Go Global Kufamba ikambani yemari yemari inokurudzirwa ne Apax Partners.
Achitaura nezvekutenga, Ophir Ben-Ezra, CEO weGo Global, akati: "Izvi zvakawanikwa zvinoratidza nzira yedu yekusimbisa chinzvimbo chedu chinotungamira mumisika yemuno nekusimudzira sevhisi yedu uye chigadzirwa chevamiriri vekufamba. Yedu M & A chiitiko chinopedzisa yedu yakasimba kukura kwehupenyu uye zvinotiisa isu kuti tive vanopa sarudzo yesarudzo yekufamba vamiririri. Ndiri kufara zvakare kugashira kumhuri yeGo Global zvikwata zvine ruzivo zvemaneja emakambani ese ari matatu akawanikwa. ”